अभिनेता प्रभाषलाई युवती फ्यानको थप्पड ! वास्तविकता के हो ? « NBC KHABAR
काठमाडौं । ‘बाहुबली’को ठूलो सफलतापछि यसै वर्षको १५ अगष्टको अवसरमा अभिनेता प्रभाषको फिल्म ‘साहो’ दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदै छ । एक्शनले भरिपूर्ण प्रभाषको यो फिल्म फ्यानहरुको पर्खाईको फिल्म बनेको छ । सोसल मिडियामा प्रभाषको एउटा भिडियो निकै भाइरल बनिरहेको छ, जहाँ उनी लस एञ्लिश गइरहेका छन् । उनी ‘साहो’को बाँकी सुटिङको लागि त्यहाँ पुगेका हुन् । यसै अवसरमा प्रभाषलाई देखेर एउटी युवती फ्यान निकै एक्साइटेड भएकी दृश्य देख्न सकिन्छ ।
प्रभाषको ती युवती फ्यान धेरैनै उत्साहति बनिन् र प्रभाषलाई गल्तिले थप्पड हान्न पुगिन् । यही भिडियो अहिले सोसल मिडियामा निकै भाइरल बन्न पुगेको छ । ती महिलाले प्रभाषको साथमा फोटो खिचाइन् । यसै क्रममा उनी निकै उत्साहित बनिन् र प्रभाषलाई छुने कोशिस गरिन् । यसरी छुने क्रममा प्रभाषको गालामा युवती फ्यानको थप्पड बजारिन पुगेको छ ।
ती युवती फ्यानको यस्तो रिएक्शन देखेर प्रभाष केही भन्दैनन्, मुस्कुराउँदै आफ्नो गाला छामछाम छुमछुम गर्छन् । त्यसपछि उनी आफ्नो अर्कै फ्यानसँग फोटो खिच्न ब्यस्त हुन्छन् । त्यसोत प्रभाषले करण जोहरको च्याट शो कफी विद करणमा फ्यानको नजिक पुग्दा लाज लाग्ने बताएका थिए । प्रभाषलाई युवती फ्यानहरु टाढै रहेर माया गरोस् भन्ने लाग्छ ।
वर्कफ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने ‘साहो’ पछि प्रभाषले पूजा हेग्डेसँग फिल्म गदैछन् । यो फिल्मलाई राधा कृष्ण कुमारले निर्देशन गर्नेछन् । यो एक लभ स्टोरी फिल्म हो । जसको सुटिङ यसै वर्ष सुरु हुनेछ ।
यता ‘साहो’ फिल्ममा भने अभिनेता प्रभाषले बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुरसँग ररोमान्स गर्र्दैछन् । ‘साहो’ को दुई शर्ट स्निकपिक भिडियो पनि रिलिज भइसकेको छ ।